I-Android yenza ikofu ngeSMS ethunyelwe kumatshini wekofu | I-Androidsis
Ke, njengoko usiva, asikudlali, ukuba ucinezela Dlala uzakubona i-Android isenza ikofu. Xa sonke ngokuqhula sathi ekuphela kwento i-Android engekhoyo ukuze ndikwenzele ikofu ntsasa nganye amakhwenkwe ka I-Zipwhip bavale imilomo yethu ngokudala umxholo omtsha, «i-Texpresso». Ngokuchasene noko kunokubonakala ngathi, iZipwhip ayisiyo nkampani eyenza oomatshini bekhofi, kodwa yitekhnoloji enikezelwe ekuthumeleni imiyalezo ebhaliweyo efini.
Khawufane ucinge ukuba usekhefini kusuku lwakho lomsebenzi kwaye uziva ngathi unekofu ekhaya. OKANYE usegumbini lokuhlambela kanye emva kokuvuka ukuze uqale usuku lwakho. Kulungile yonke imihla umyalezo wombhalo Lo matshini ukhethekileyo unokuyalelwa ukuba ulungiselele (sicinge) ikofu emnandi, egcinwa ishushu de sisele.
Umatshini ufumana umyalezo obhaliweyo kunye neerobhothi ezintle umsebenzi wakho wasekhaya uqala: Uthatha ikomityi elahlwayo ayibeke kumatshini, oqala ukugaya ikofu aze asele isiselo esinencasa. Ke kwaye kuyamangalisa ukuba irobhothi, njengoko ubona kwividiyo, phrinta ngeinki enokutyiwa kwigwebu yekofu amanani amathathu okugqibela eselfowuni yakho, ukuze kungathandabuzeki ukuba loo kofu yeyakho kwaye inguwe wedwa (hayi loo mntu usebenza naye ngobuqili).
Ndiqinisekile emva kokubukela ividiyo uyafa ukuba unayo, Ndiyaphazama? Kulungile ke ngelishwa iZipwhip icacisa ukuba azinanjongo zokwazisa ngalo matshini ulwodwa. Iindaba ezimnandi zezokuba iZipwhip ikhuphela eluntwini ikhowudi yemvelaphi yesicelo sayo sokuthumela imiyalezo ngelifu, kunye "neeplani" zale tespresso inkulu, ukuze uyenze kuphela; mhlawumbi inokuba yintsimi elungileyo phucula kumaxesha eli hlabathi lisengxakini.
Kwi-Androidsis sifuna ukuba nayo, ke siyakukhuthaza ukuba utsibe ekwenzeni ubomi bethu bube lula kancinci!
Iinkcukacha ezithe xaxe - Abasebenzisi be-Android ngabo basebenzisa i-smartphone kakhulu kwigumbi lokuhlambela
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Android yenza ikofu (yintoni eyayilahlekile)
Ewe, ukuba ne-nespresso eshushu kwi-1m kwaye kuthatha i-20s ukwenza ikofu kubonakala ngathi ayisiyonto ilunge kakhulu kum.
UJoaquin Padilla Rivero sitsho
Kwaye ukuba ialam inewotshi yakho (iselfowuni yakho, umzekelo) inokudityaniswa nale nespresso ukuze xa uvuka ikofu ibe intsha nje?
Phendula u-Joaquin Padilla Rivero
Eyona nto inomdla ngevidiyo ngumxholo wemiyalezo ephathekayo kwi-pc.
Kutheni bengayikhuphi ingxelo kaWhatsApp yePC?